सामसङ S21 सिरिजका फोनहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध – प्रबिधी खबर
February 8, 2021 by Prabidhikhabar
सामसङ नेपालले हालै उत्कृष्ट टपलाइन प्रविधियुक्त S21 सिरिज प्रस्तुत गरेको छ, जसको आएकोनिक डिजाइनले प्रयोगकर्तालाई अझै मनमोहक पार्ने छ ।
अत्याधुनिक ग्यालेक्सी S21, S21+ तथा S21 Ultra स्मार्टफोनको अनुभवलाई यसमा भएका उत्कृष्ट इपिक एवं नवीन फिचरहरुले अझै अर्को तहसम्म पुर्याउने छ।
नेपालको सबैभन्दा विश्वासिलो स्मार्टफोन ब्राण्ड सामसङले Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 तथा Galaxy S21+ स्मार्टफोनहरुको बिक्री सुरुगरेको छ । बोल्ड डिजानइ, स्टेट अफ द आर्ट इनोभेसनको साथ उच्चस्तरीय प्रविधिको प्रयोगले यि फोनहरुले वास्तवमै दैनिक जीवनलाई अझै उत्कृष्ट एवं सहज तुल्याउने छ । यि फोनहरुमा उपलब्ध भएका प्रो ग्रेड क्यामरा सिस्टम तथा ब्राइटेस्ट, इन्टलिजेन्ट डिस्प्ले लगायत विभिन्न सुविधाहरुले प्रयोगकर्ताहरुका हरेक पलहरुलाई अझै बढी Epic Experience प्रदान गर्ने छन् ।
नयाँ S21 सिरिजमा विभिन्न आकर्षक, आधुनिक डिजाइन, इपिक प्रो ग्रेड क्यामरा, भिडियो एवं हालसम्मकै शक्तिशाली प्रोसेसर राखिएको छ । S21, S21+ तथा S21 Ultra मा अन्य स्मार्टफोनहरुमा नभएका एवं अतुलनीय सुविधाहरु विद्यमान रहेका छन् ।
यसमा विभिन्न ग्राउन्ड ब्रेकिङ्ग फिचरहरु रहेका छन् । Samsung Galaxy S21 तथा S21 Plus मा प्रो–ग्रेड क्यामरा तथा नयाँ S21 Ultra उपल्लो तहको विशेषताहरु रहेका छन् । यसमा एडभान्स प्रो ग्रेड क्यामरा तथा इन्टलिजेन्ट डिस्प्ले रहेको छ । S सिरिज अन्तर्गत पहिलो पटक S Pen पनि रहेको छ ।
“सामसङ S21 सिरिजको प्रि बुकिङ्गमा भएको उल्लेखनीय सहभागीता एवं प्रतिकृयाबाट वास्तवमै हामीलाई अझै उत्साहित बनाएको छ, यस सहभागीता एवं सकारात्मक प्रतिकृयाको लागि हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौं । सामसङमा, हामीले निरन्तर नयाँ आविष्कारहरु गरी स्मार्टफोनको जगतमा नयाँ आयाम थपेका छौं । नयाँ S21 सिरिज यसैको अर्थपूर्ण आविष्कारको प्रमाण पनि हो । प्रयोगकर्ताहरुको दैनिक जिवनलाई अझै सहज एवं समृद्ध बनाएको छ र प्रयोगकर्ताहरुले के चाहनुहुन्छ त्यो भन्दा अझै बढी प्रदान गरिएको छ । ” सामसङ मोबाइल नेपालका विजिनेस हेड प्रणय रत्न स्थापितले बताउनु भयो ।
ग्यालेक्सी S21 सिरिजले वास्तवमै एक नयाँ डिजाइन र बोल्ड नयाँ शैली प्रदान गरेर अरु स्मार्टफोन भन्दा पृथक बन्न पुगेको छ । S21 सिरिज सबै तीन स्मार्टफोनहरु आइकनिक डिजाइनको साथ बोल्ड एवं स्ट्राइकिङ्ग एस्थेटिक्सको साथ उपलब्ध रहेको छ ।
ग्यालेक्सी S21 अल्ट्रामा विशेष रूपमा कम्प्याक्ट ६.८ इन्च डिस्प्लेको प्रदान गरिएको छ । यसले इन्टलिजेन्ट, edge-to-edge Dynamic AMOLED 2X Infinity-O डिस्प्ले, सहज स्क्रोलिङ तथा उत्कृष्ट दृश्यावलोकनको लागि adaptive 120Hz refresh rate तथा Quad HD+ डिस्प्ले रहेको छ । Galaxy S21 and S21+, Galaxy S21 Ultra मा आँखालाई थकान अनुभव नहुने विशेष Eye Comfort Shield पनि रहेको छ ।
S21, S21+ र S21अल्ट्रामा लुक्स एवं जीवन्त अनुभवका लागि उत्कृष्ट फिनिसिङ्ग गरिएको छ । आकर्षक, आँखालाई लोभ्याउने खालको नयाँ सिग्नेचर कलर, फान्टम भ्वोइलेट रंग समायोजन गरिएको छ । साथै Galaxy S21 Ultra पनि एक परिष्कृत एवं टाइमलेस लुक्सलाई समेटेको छ । यसका Phantom Black तथा Phantom Silver दुई रंगहरु मा उपलब्ध छन् ।
सबै नयाँ ग्यालक्सी S21 सीरीजले सामसङको क्यामरा हेरिटेजलाई प्रोग्रेड क्यामरा तथा भिडियो आविष्कारको साथ अगाडि बढाएको छ । जसले प्रत्येक सटहरु विशेष शटका रुपमा लिन मद्दत गर्दछ । ग्यालेक्सी S21 र ग्यालेक्सी S21+ एआई द्वारा संचालित ट्रिपल–लेन्स प्रो–ग्रेड क्यामेराको साथ उपलब्ध छ जसले रचनात्मक नियन्त्रण प्रदान गर्दछ । एआई संचालित क्यामेराले विषयवस्तुलाई सहज रूपमा आँकलन गर्दछ र दृश्यअनुसार आफूलाई समायोजन गर्दछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सही शटहरू लिने स्वतन्त्रता प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । यो सुधारिएको स्पेस जुम फिचरको साथ पनि उपलब्ध छ जुन हल्लिएको हातहरूको असरलाई न्यून गर्दछ र ३०X को जुमको साथ स्पष्ट फोटो खिच्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ ।
S21 अल्ट्रा सबभन्दा उन्नत प्रोग्रेड क्यामेरा सिस्टमका साथ उपलब्ध छ जुन जस्तोसुकै प्रकाशको अवस्थाहरूमा पनि आश्चर्यजनक, स्टुडियोको जस्तै गुणस्तरीय तस्वीरहरू क्याप्चर गर्न सकिन्छ । यसले क्वाड रियर क्यामेरा (अल्ट्रा–वाइड, वाइड र डुअल टेलि–लेन्सहरू) उपलब्ध रहेको छ । जुन अपग्रेड गरिएको १०८ एमपि प्रोसेरको साथ आउँदछ, जसले ६४ गुणा स्पष्ट कलरहरुको साथ १२ विट HDR फोटो तथा ३ गुणा वाइडर डाइनामिक रेन्जमा फोटो खिच्न सक्दछ । S21 अल्ट्रा १००x स्पेस जुुमको साथ पनि आउँदछ जुन सामसङकको पहिलो ड्युअल–टेलि लेन्स सिस्टमद्वारा संचालित हो । यसमा भएको improved bright night sensor ले प्रयोगकर्तालाई कम लाइटको अवस्थामा पनि उत्कृष्ट एवं उच्च गुणस्तरीय फोटो खिच्न सकिन्छ ।
यस सिरिजमा सामसङको आप्mनै अत्याधुनिक प्रोसेसर Exynos 2100 को प्रयोग गरिएको छ । नयाँ ग्यालेक्सी S21 सिरिज स्मार्टफोनले प्रयोगकर्तालाई नेक्स्ट जेनेरेसन कार्य क्षमता प्रदान गर्दछ । जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्पूर्ण ग्यालेक्सी इकोसिस्टममा पहुँच प्रदान गर्दछ । यसमा फोनमा अत्याधुनिक चिपसेट तथा स्पिड इफिसियन्सीको समायोजन गरिएको छ । यसले 5G कनेक्शन तथा अन डिभाइस एआइ लाई सपोर्ट गर्दछ । त्यसैले फोटो प्रोसेस, डप भिडियो रेकर्ड तथा गेमिङ्ग म्याराथोन तथा इडिट भिडियो जस्ता कार्यहरु सहजै सम्पादन गर्न सकिन्छ ।
उत्कृष्ट कार्यक्षमता एवं प्रोडक्सन
नयाँ S21 सिरिजले वास्तवमै नयाँ कार्यक्षमताका साथ सहजै कनेक्ट गर्न सक्दछ । यस फोनमा हाल सम्मकै अत्याधुनिक चिपसेटको प्रयोग गरिएको छ, जसले गर्दा स्पीड र इफिसियन्सीको उत्कृष्ट तालमेल भएको छ । यस फोनमा भएको यस्ता सुविधाहरुले फोटोलाई प्रोसेस गर्न, टप भिडियोहरु खिच्न तथा इडिट गर्न तथा गेमिङ्ग म्याराथोनको मज्जा लिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी, S21 ultra फोन मा उच्चस्तरीय 5mm को नानो चिपसेटको समायोजन गरिएको छ । यसले गर्दा उत्कृष्ट कम्प्युटिङ्ग क्षमता, उच्चस्तरीय इनर्जी इफिसियन्सी तथा उच्चस्तरीय स्पीड प्राप्त गर्न सकिन्छ । S21 Ultra फोनलाई ३० मिनेटमा ५०% चार्ज सहजै गर्न सकिन्छ ।
सामसङको नक्स भल्टद्वारा अझै सुरक्षित गरिएको छ । यसमा आफ्नै proprietary chipset level (SoC) सेक्युरेटि प्ल्याटफर्म, टाम्पर रेजिस्टेन्ट सेक्युएर मेमोरी, सामसङ नक्स भल्टले S21 लाई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।
S21 सिरिजमा प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथ्यांक सुरक्षाको लागि नयाँ टुल्सहरुको प्रयोग गरिएको छ । S21 सिरिजमा, प्रयोगकर्ताले अब सुरक्षित तरिकाबाट फोटोको मेटा डाटा लोकेशनलाई हटाउन सक्नुहुनेछ । साथै Galaxy S21 मा भएको प्राइभेट शेयर फङ्गशनले प्रयोगकर्तालाई पठाएको कन्टेन्ट कति समयसम्म एक्सेस गर्न दिने हो त्यो तय गर्न पनि सकिन्छ ।
Galaxy S21 Ultra मा उत्कृष्ट प्रविधि जस्तै Ultra-wideband (UWB) तथा नयाँ कनेक्टिभिटि क्यापासिटिको प्रयोग गरिएको छ । यसले उपल्लो तहमा पुगेर सिर्जनशीलता एवं उत्पादनशीलता वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ । पहिलो पटक क् सिरजमा सामसङले क् एभल को सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । प्रयोगकर्ताहरुले अब Galaxy S21 Ultra मा S Pen को सुविधाहरु प्राप्त गरी छुट्टै अनुभव प्राप्त गर्न सक्नुहुने छ ।
मोबाइल क्षेत्रमा पहिलो पटक सामसङले 0% ब्याज मा EMI पेश गरेको छ । यस सुविधा अन्तर्गत कम्तिमा रु. ९२०० को १२ किस्ता ग्राहकले तिर्नुपर्ने हुन्छ। सामसङको ब्राण्ड स्टोरबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिने किस्तावन्दी योजना नेपालका बैंकहरु NIC Asia Bank, NIBL, Nabil Bank, Sanima Bank तथा Global IME Bank मार्फत् लिन सकिन्छ ।
ग्राहकहरूले अब आफ्नो पुरानो फोनलाई S21 सिरिज फोनसँग साट्दा फोनको मूल्याङ्कन सहित थप रु.३००० रुपैयाँ अतिरिक्त लाभ लिन पाउनेछन् । यो सुविधा Arko फोन र आईएमएस एक्सचेन्जबाट लिन सकिन्छ ।
१ वर्षको लागि वन टाइम ब्रेकेज अन्तर्गत एक पटक ब्रेकेज बिमा नेपालको NLG Insurance Company मार्फत् प्राप्त गर्न सकिने छ ।
मूल्य, तथा उपलब्धता
नयाँ Galaxy S21 Ultra (12GB / 256GB) को मूल्य रु. १,५४,९९९ तोकिएको छ । त्यस्तै Galaxy S21+ (8GB /256GB) को मूल्य रु. १,२९,९९९ तोकिएको छ भने S21 (8GB/256GB) को मूल्य रु. १,०९,९९९ राखिएको छ ।
Galaxy S21 Ultra दुई वटा रंग Phantom Black र Phantom Silver रङहरुमा उपलब्ध रहेको छ भने Galaxy S21+ विभिन्न तीन रंगहरु Phantom Black, Phantom Silver र Phantom Violet रङहरुमा उपलब्ध छ त्यस्तै Samsung S21 दुई रंग Phantom Gray र Phantom Violet मा उपलब्ध रहेको छ ।